globalpressonline » Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulankoodii ugu horeeyey kadib ansixintii Baarlamaanku
Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulankoodii ugu horeeyey kadib ansixintii Baarlamaanku
Mar 31, 2017 - Comments off
Mogadishu. Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulankoodii ugu horeeyey kadib ansixintii Baarlamaanka ee, 29 Maarso 2017. Shirkan waxaa guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyre, waxaana ugu horeyn looga hadlay Ajande ka kooban soo dhoweyn, Nidaamka iyo xeerararka shirarka Golaha, Diyaarinta xil la wareegida Wasiirada cusub, Qorshaha Xukuumadu ku shaqeyn doonto, Arrimaha Amniga iyo Abaaraha.
Waxaan galnay marxalad cusub, waana inaan u diyaar garowno sidii shacabka loo gaarsiin lahaa, nabad, xasilooni iyo dib u heshiisiin” ayuu yiri R/wasaaraha oo ka hadlayay shirka Golaha”. Ayuu yiri Ra’iisul Wasaarahu. Markii uu soo dhamaaday kulanka Golaha Wasiirada ayaa waxaa Warbaahinta la hadlay Wasiirka Warfaafinta iyo Hanuuninta dadweynaha Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan.